Sina mpamokatra sy mpamatsy pumpn driven pump | damei kingmech pump
Size: DN25 ~ DN300
Fahafahana: ~ 800m3 / h
Loha: ~ 300m
Temperature: latsaky ny 120 ℃
Pressure: 2,5 ~ 10MPa
Hery: ~ 280kW
1. Long pump pump submerged
2.M hohonu ambany lentika dia 7m.
3.Pompana ranon-javatra mampidi-doza dia hasiana akorandriaka roa sosona, ho fanairana izany rehefa akoraka ny akorany fitoerany voalohany.
4.Ny hazo familiana dia tohanan'ny alikaola, ny fanodinana menaka dia fanosorana menaka; paompy zana-kazo dia tohanan'ny hydraulic sliding bear, sliding bear dia soloina amin'ny fantson'ny rano paompy.
5.Pagnetic pump dia afaka mahatratra izany raha tsy misy ny famoahana, it's mety handefasana ranona mandoto, manapoizina, mora mirehitra, mipoaka, lafo na mora entona. Ankoatr'izay, ny paompy magnetika dia mety ihany koa amin'ny fampitana hafanana avo, tsiranoka ambany ambany ary ranoka eo ambanin'ny toetran'ny banga.
7. Misy sliding bear ao anaty paompy andriamby, toy izany koa's mety hiasa tsy tapaka. Miezaha hisoroka ny ora voalaza, matetika tsy mihoatra ny 10time ao anatin'ny adiny iray. Avy eo dia afaka mampihena ny abrasion amin'ny fikorisa mihetsiketsika mandritra ny fanombohana sy ny fijanonana, ary hanitatra ny fiainany miasa.
8. Ho an'ny paompy magnetika maripana avo lenta, misy ampahany manitatra eo anelanelan'ny paompy sy ny fametahana andriamby, izay namorona tsingerina tsy miankina roa.
9. Nandritra ny fotoana niasana, ny hery axial an'ny paompy dia mandanjalanja ho azy amin'ny alàlan'ny herin'ny herinaratra, ny kapila fanosehana dia mitondra fotsiny ny fanesorana axial eo ho eo rehefa manomboka sy mijanona ny paompy.
Previous: Paompy drive andriamby MZF
Manaraka: Paompy entin'ny andriamby MMC